Maxay yihiin Qaybaha Ganacsi ee ugu Fiican ee Suuq-Ganacsiga? - Anhtarka Antarct
goobo kala duwan. Qalabkani waa mid aad u caawin kara bilowga, bloggers, freelancers iyo sidoo kale ganacsiga iyo ganacsiyada waaweyn. Waxay awoodi karaan inay xoqdo ama ufiiriyaan xogta si toos ah ama si toos ah, waxay soo qaataan macluumaad cusub oo jira iyo inay ku kaydiyaan si fudud.
Bixo waa shabakad ganacsi oo ganacsi ah iyo qalab wax lagu duubo - 235 40 18 yokohama. Waa aalado awood leh oo furan oo laga helo macdanta farsamada gacanta oo ka shaqeysa xargaha qashinka casriga ah waxayna dhistaa macluumaad qaas ah oo adiga kuu gaar ah, oo ka soo ururiya ilo dhawr ah. Waxaad u isticmaali kartaa ganacsiga yaryar iyo kuwa aad u ballaadhan oo keydso dhamaan xogta waxtar leh ee ku saabsan darawalkaaga adag adigoo kaliya guji. Darcy Ripper:
DEiXTo waxaa sidoo kale loo yaqaan 'AEiXTo'. Waa mid ka mid ah qalabka wax soo saarka ugu caansan oo caan ah oo ku salaysan qaabka W3C Document Object comprehensive. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad soo qaadato xog sax ah waxayna kuu habeyn kartaa faylashaada qaabka xarfaha ah. Waxay ku siinaysaa fursad aad u sahlan oo aad u hesho fursado kala duwan. Ka sokow, waxaad qorsheyn kartaa goorta iyo sida loo jaro shabakadaha. Waxay badbaadineysaa wakhti badan, dadaal, iyo tamar.
Tusaaluhu waa mid ka mid ah meelaha ugu qaalisan ee ugu fiican ee ganacsiga websaydhka ah iyo barnaamijyada taranka. Waa asal ahaan nidaam madadaalo ah oo loogu talagalay dadka isticmaala Python waxayna leedahay qalabyo la xiriira Wikipedia API, Google, HTML DOM parser iyo Twitter. Ma aha oo kaliya xayeysiin oo ku wareegsana boggagaaga laakiin sidoo kale waxay hirgelisaa xogta faa'iido leh waxayna qabanqaabisaa faylasha sida waafaqsan shuruudahaaga.
Dajinta waa ganacsi shabakad ganacsi oo la socda qalab furan iyo qaabdhismeed wada shaqeyn. Waxay ka caawisaa xogta laga soo qaado bogagga shabakadaha yaryar iyo kuwa waaweynba. Isticmaalayaasha kaliya waxay dejiyaan qawaaniinta saarida xogta waxayna u ogolaadaan Qaadida inay sameeyaan intiisa kale. Waxay ku qoran tahay Python waxayna ku socotaa BSD, Mac, Windows, iyo Linux.
80legs waa adeeg shabakadeed oo awood leh oo caan ah oo la yimaada xulasho Custom Web Crawling iyo daraasado kale oo gaar ah. Waxay xoqin kartaa ilaa shan milyan bogagga bogga saacad gudaheed, iyo xirmooyinkeeda asaasiga ahi waxay bixisaa adeegyo bilaash ah oo taageeraya in ka badan 12,000 oo uruurin ah. Si kastaba ha noqotee, nooca premium wuxuu u fiican yahay isticmaalka ganacsiga iyo kharashaadka ku dhawaad ​​$ 40 bishiiba.